N'ogbe Injectable Anabolic Steroid Trestolone Acetate ( MENT ) maka Onye na-emepụta ọzụzụ ọzụzụ ike na onye na-eweta |Taigui
Injectable Anabolic Steroid Trestolone Acetate (MENT) maka ọzụzụ ike
Aha ngwaahịa: Trestolone acetate
Nọmba CAS: 6157-87-5
Ụdị okwu: 17β -Hydroxy-7a -methylestr-4-en-3-otu acetate;3-Oxo-7a-methylestra-4-ene-17β-ol acetate;Acetic acid 3-oxo-7a-methylestra-4-ene-17β-yl ester;NSC-69948;U-15614;7-methyl-19-nortestosterone (MENT)
Ụdị anụ ahụ: C21H30O3
Ebe mgbaze: 447.571 ° C na 760 mmHg
Arọ Molecular: 330.47
Ebe Flash: 194.228 Celsius
Njupụta: 1.117 g/cm3
Trestolone Acetate MENT Powder pharmaceutical ọkwa steroid maka uru akwara 0
Ebe esi esi 447.6°C na 760 mmHg
Ntụgharị ntụgharị 1.538
Vapor Pressur 3.33E-08mmHg na 25°C
Jiri: Hormones na Iwu nke Ọrụ Endocrine nke Ọgwụ.Trestolone Acetate nwere ike ịkọwa nke ọma dị ka ihe atụnyere nchikota nke Testosterone na Trenbolone, ọ bụ ezie na ọ bụ kemịkalụ nke Norandren (Deca).
Otu esi esi nri MENT
1 gram Trestolone Acetate ntụ ntụ
-16.55 ml_ Mmanụ mkpụrụ vaịn (GSO)
- 0.6 ml nke mmanya benzyl
Benzyl benzoate - 2 ml
-3 grams Trestolone Acetate ntụ ntụ
-49.65 mL mmanụ mkpụrụ vaịn
- 1.8 ml nke mmanya mmanya benzyl
Benzyl benzoate - 6 ml
Kedu ka MENT si arụ ọrụ?
A pụrụ iwere Trestolone Acetate n'ụdị dị iche iche, gụnyere injections na ntụ ntụ.N'ọdịnihu, ọ ga-adịkwa n'ụdị ọnụ.Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na usoro nchịkọta, na-enyere ndị na-arụ ọrụ ahụ ike na ndị na-ebuli ibu aka iwuli elu ahụ ike ha, ma na-ebelata abụba.Enwere ike ijikọta ya na nkwalite ndị ọzọ iji nweta nsonaazụ kachasị site na ịkpụ na ime ka ahụ ike sie ike.
Na oke dose nke 50 mgs kwa ụbọchị, ndị ọrụ nwere ike ịtụ anya uru dị ukwuu n'ime ọnwa atọ nke ojiji.Ọ ga-ekwe omume ịbawanye ọkwa ike na oke anụ ahụ site na uru dị arọ dị ka 20 pound n'ime oge ahụ.
ị kwesịrị ị na-ewere 50-75 mg kwa ụbọchị maka izu anọ n'ụtụtụ na tupu ịlakpu ụra iji hụ na ezigbo uru nakwa dị ka agbam ume na ike etoju.
Maka ndị ọrụ dị elu
75-100 mg kwa ụbọchị dị mma, mana ịkwesịrị ịgbaso oge ndị a (usoro ọgwụgwọ dịgasị iche site na ika);
Tupu mgbatị ahụ;25-50 mg
Tupu oge ụra;25 mg
Enwere ike were Trestolone ọnụ ma ọ bụ site na ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ transdermal.Otú ọ dị, ụzọ kachasị mma maka nnyefe anabolic a bụ site na ntụtụ.Jide n'aka na ị na-agbaso usoro ọgwụgwọ akwadoro iji belata ịdị njọ nke mmetụta ndị na-achọghị ma nweta nsonaazụ kacha mma.
Maka ndị na-agba mbọ ime ka ahụ ha zuo oke, ha ga-enyocha ohere dị iche iche iji ruo ebumnuche ahụike ha.Ojiji Trestolone Acetate bụ otu ụzọ iji nweta ahụ siri ike, nke nwere oke uru akwara.Ọ ga-ekwe omume nweta nsonaazụ dị mma na-enweghị mmetụta ọjọọ, ihe ọzọ kpatara na ọtụtụ ga-anwale Trestolone Acetate na ndị ọzọ anabolic steroid.
Trestolone Acetate Menment na-arụ ọrụ
Ment enweghị ike ịbụ 5-a belata n'ime ụdị DHT, ya mere ọ na-ebelata ikike nke mmetụta ndị dị ka ntutu isi, ihe otutu, na prostate gbasaa.N'ụzọ dị mwute, na-enweghị ike ịtụgharị na DHT, ọnụ ọgụgụ ntụgharị na estrogen na-abawanye nke ukwuu.Nke a nwere ike iduga gynecomastia, njide mmiri, na mmụba nke mkpokọta abụba n'ozuzu ya.
Trestolone ejikọtala ụkọ ya na ikike iji ngwa ngwa na-agbakọta na akwara ma nwekwuo ike (na obere dose karịa testosterone).Enwere ike iji ya mepụta ụdị injectable nke trestolone acetate nke a na-akpọ GP Ment, ọ bịara na karama 10ml nke etinyere na 50mg / ml.
Ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike ikwu n'ụzọ ezi uche dị na ya na acetate ester ga-enye ya ụfọdụ ọnụọgụ nke bioavailability dị ka methenolone acetate, ma ọ bụ mbadamba nkume Primobolan mgbe e risịrị nri, Trestolone Acetate Ment anaghị ejikarị ọnụ.Otú ọ dị, bang maka ego ahụ na-ekwu na ngwọta injectable ma ọ bụ transdermal bụ nanị ụzọ dị irè isi were steroid a.
Nke gara aga: Methenolone Enanthate Primobolan Depot Fitness Injectable anabolic Steroid Hormones
Osote: Steroid na-ewu Muscle Powder Boldenone Base / Dehydrotestosterone CAS 846-48-0